Is-baarid Covid-19 xirmada ogaanshaha antigen Sichuan Yinye Medical Technology Co Ltd.
Sichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd. waxay ku taalaa Xarunta Caalamiga ah ee Chengdu, Gobolka Sichuan, Shiinaha. Waa shirkad tiknoolajiyad sare ah oo diiradda saareysa R&D, soo-saarista iyo iibinta baaritaanka fitamiinada (IVD) ee biomedicine. Waxaa ka go'an in la dhiso dhammaan qaab-dhismeedka silsiladda warshadaha ee nidaamka ogaanshaha sirdoonka macmalka ah. Khadadka sheyga ee shirkaddu wuxuu daboolayaa noocyo badan oo ah waxyaabaha lagu ogaanayo fitamiinnada sida difaaca jirka, baaritaanka kelli, iyo baaritaanka microbiological. Waxay leedahay uruurinta tikniyoolajiyad qoto dheer iyo faa'iidooyin farsamo oo gaar ah oo ku saabsan dhinacyada baaritaanka kansarka hore, ogaanshaha degdega ah ee cudurada faafa, iyo baaritaanka degdega ah ee cudurada gabowga.
Khadka wax soo saarka ee shirkaddu wuxuu daboolayaa noocyo badan oo ah waxyaabaha lagu ogaado fitamiinnada sida difaaca jirka ...
COVID-19 Qalabka Ogaanshaha Antigen ee Muunadaha Sanka / Xaakada （Is-Baaritaan)
COVID-19 / Hargabka A / Qalabka Baadhista ee Hargabka B
Control Xakameynta tayada oo adag lana hubiyo in heerka isticmaalka qalabka caafimaad uu ka badan yahay 95%.
Price Qiimaha iibinta tooska ah ee Warshad, ma jiro qeybiyaha kasbanaya farqiga qiimaha.
Inye 20 sano oo uu khibrad u leeyahay alaabada caafimaadka, Yinye wuxuu si xirfad leh ugu adeegay in ka badan 30 dal oo macaamiil ah oo adduunka ah
Iyadoo 10 sano la damaanad qaadayo tayada si loo hubiyo iskaashi joogto ah.
● In ka badan 130 shaqaale xirfadlayaal ah inay ku siiyaan xalka alaabada oo dhammaystiran.
WAAN KUGU SOO BIXI DOONAA
ADEEGYADA XIRFAD LEH
Yin Ye waxay leedahay in ka badan 10 sano oo khibrad xirfadeed ah waxayna u heellan tahay ka hortagga cudurrada faafa.
Shaqaalaha Xirfadlayaasha ah
130+ shaqaale xirfadlayaal ah si ay kuu siiyaan xalal badeecad kaladuwan oo buuxa.
Cinwaanno Xirfad Sare leh
Cinwaanada xirfadeed ee heerka sare iyo darajooyinka takhasuska ayaa ka badan 30% kooxda shirkadda.
Wax soo saarka ayaa loo dhoofiyaa in ka badan 30 dal iyo gobol, iyagoo ka caawinaya ka hortagga cudurrada faafa ee maxalliga ah.
New-Gene & Yinye wuxuu leeyahay seddex qol oo nadiif ah oo GMP ah oo loogu talagalay soosaarida qulqulka socodka ee dhinaca kaas oo hubiya heerka ugu sareeya ee heerarka wax soo saarka
Awood Wax Soo Saar Sare
Waqtigaan la joogo, New-Gene & Yinye wuxuu leeyahay in kabadan 500 oo shaqaale wax soo saar ah oo waqti buuxa ah, taas oo keenta awood wax soo saar maalinle ah oo ah 3,000,000 kumbiyuutar
Khadadka Waxsoosaarka Iswada
New-Gene & Yinye waxay leedahay laba wershadood iyo lix khad oo wax soo saar si otomaatig ah u shaqeeya oo yareeya khaladaadka aadanaha isla markaana kordhiya waxtarka wax soo saarka
NEWGENE Waxay heshay Ansixin Is-baaris ah oo ku saabsan Biljam iyo Iswidhan
COVID-19 Qalabka baaritaanka Antigen wuxuu helay oggolaanshaha is-baaritaanka ee Wasaaradda Caafimaadka Beljamka (FAMHP) iyo Wakaaladda Wax soosaarka Caafimaadka Iswiidhan (Hay'adda Wax soosaarka Caafimaadka Iswiidhan). NEWGENE waa shirkaddii ugu horreysay ee Shiineys ah ee hesho oggolaanshaha is-tijaabinta labadan dal ee Yurub, ka dib Denmar ...
Tijaabada antigen ee shirkada Shiinaha ee COVID-19 ayaa ku guuleysatay "Grand Slam" 15 dal oo ay ku jiraan Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Boortaqiiska hal talaabo! Waqtigan xaadirka ah, faafitaanka fayraska mutant iyo arrimo kale, cudurka faafa ee 'COIVD-19' ee dalal badan oo Yurub ah ayaa dib u soo noolaaday ...
Warbixinta Gaarka ah ee TV-ga ee NEWGENE Novel Coronavirus Antigen Product ee Spain
NEWGENE Novel Coronavirus Antigen ogaanshaha waxsoosaarka ayaa helay warbixin TV gaar ah oo kusaabsan idaacada maxaliga ah ee Isbaanishka Antena3. Wax soo saarka NEWGENE wuxuu helaa caan caan ah waxaana si weyn looga aqoonsan yahay gudaha waxqabadkiisa ka sarreeya iyo qallafsanaanta ...
Hadana waxay kuxirantahay tayo aad ufiican, qiimo macquul ah, adeega ugufiican, waxaan ka helnay jawaab celin wanaagsan macaamiisha dibada. Sanado badan oo adeeg wanaagsan iyo horumarin ah, waxaan leenahay koox xirfadlayaal iibka ganacsiga caalamiga ah.
Waxaan diiradda saareynaa faahfaahin kasta oo ka baaraandegidda dalbashada loogu talagalay macaamiisha illaa ay ka helayaan alaab ammaan ah oo cod leh adeeg saad wanaagsan iyo kharash dhaqaale.